Mudanayasha baarlamaanka Puntland oo codka kalsoonida siiyey 7 ka mid ah 9-ka xubnood ee Guddiga Doorashada Puntland. – Radio Daljir
Mudanayasha baarlamaanka Puntland oo codka kalsoonida siiyey 7 ka mid ah 9-ka xubnood ee Guddiga Doorashada Puntland.
Garowe, Jul 12 – Mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa fadhigoodii maanta cod kalsooni ah siiyey 7 ka mid ah 9-ka xubnood ee Guddiga Doorashada Puntland.
7-da xubnood ee uu goluhu kalsoonida siiyey ayaa kala ahaa:
1. Barkhad Cali Saalax,
2. Cismaan Maxamuud X. Xasan,
3. Axmed Maxamed Axmed,
4. Cali C/raxmaan Xirsi,
5. Yuusuf Xaaji Saciid,
6. Maxamuud Soofe Xasan,
7. C/risaaq Axmed Sh. Shoolaay.
2-da xubnood ee aan la dhaarin ayaa kala ahaa Maxamed Xasan Barre ‘Shimbiralaaye’ oo sida uu sheegay afahayeenka baarlamaanku safar shaqo ku maqan, iyo Muxubo Maxamed Ciise oo la sheegay in ay u maqan tahay arrimo caafimaad; laba xubnood ayaa afhayeenka baarlamaanku sheegay in gadaal laga ansixin doono.
Xubnaha Guddiga Doorashada ayaa inta aan la codka kalsoonida la siin ka hor si kooban uga hadlay sooyaalkooda nololeed, baaxada mas’uuliyada loo dhiibay, sida ay ugu faraxsan yihiin xilka ay ummadda u hayaan, ballanna ku qaaday in ay si cadaalad ah u gudan doonaan xilka.
Fadhiga golaha ee maanta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa 51 xildhibaan oo cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen xubnaha Guddiga Doorashada.
Mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo ansixinta kadib la hadlay xubnaha Guddiga Doorashada ayaa kula dardaarmay si daacadnimo ah u gutaan waajibaadkooda, isaga oo intaas ku daray in maanta ay guul u soo hoyatay ummadda reer Puntland, ayna qaadeen tallaabo horumar ah oo ay muddo ku taamayeen.
5 ka mid ah xubnaha ayaa waxaa magacaabay xukuumada M/weyne Faroole halka 4-ta kalena uu magacaabay baarlamaanku.
C/Wali Maxamed Sheekh,